प्रवासबाटै चर्चाको शिखर चढ्दैछन् उदयिमान गीतकार : यदुराज राई - Pardeshi Khabar
भनिन्छ कलाको कुनै सिमा हुँदैन । न यसको जात हुन्छ ? न त धर्म नै । न कुनै उमेरको परिधि हुन्छ । यो त स्वतन्त्र हुन्छ । जहाँ गए पनि जता पुगे पनि यो निरन्तर अगाडी बढीरहन्छ । ईच्छा शक्ति हुने हो भने संसारको जुन सुकै कुनामा पुगेर पनि कसैलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ । यस्तै उदाहरणका पात्रको बारेमा चर्चा गरौं । प्रवासमा रहेर पनि नेपाली गीत रचनालाई निरन्तरता दिईरहेका व्यक्तित्वको बारेमा परदेशी खबरमा आज हामी चर्चा गर्दैछौं ।
कला क्षेत्रमा पनि गीत लेखन अझ महत्वपूर्ण कला हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर एकै किसिमको काम गर्दा पनि कसैको चर्चा बढी हुन्छ कसैको कम । यहाँ हामीले यस्तै एक जना गीतकारलाई हामीले भेटाएका छौं । जो आफैमा उत्कृष्ट भएर पनि बाहिर उनको चर्चा त्यति सुनिदैन । हो यस्तै गुमनाम तर उत्कृष्टता र चर्चाको शिखरमा चढ्दै गरेका गीतकार यदुराज राईको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौं ।
यदुराज राईको जन्मस्थान खोटाङ, केपिलासगढी ३, बासपानी हो । विगत ५ वर्ष देखी कुवेतलाई कर्मथलोको रुपमा चुन्नु भएका गीतकार राईको शव्द रचनामा राई ईज किंग राजेश पायल राई देखी अन्जु पन्त हुँदै हालकी चर्चित गायिका मेलिना राई, राकेश किराती, रोशन राई, अमृता लिम्बू, ममता राई लगायतले स्वर दिई सकेका छन् । यस्तै अरु ६/७ वटा गीतहरु रेकर्डिङको क्रममा छन् ।
खोटाङ, भोजपुर तिर गीत संगीतको एउटा छुट्टै माहौल रहेको र बरिष्ठ कवि तथा गीतकार भुपाल राईका टिपिकल गीतहरु र आफ्नै गाउँले राजन राईको “जिन्दगी यो फूलै फुल्को थुंगो हुँदैन” लगायतले आफूलाई गीत लेखनमा आकर्षित गरेको बताउँछन् गीतकार यदुराज राई । निकट भविष्यमा आफूले लेखेका गीतहरुको एल्वम निकाल्ने सोच राखेका यिनै गीतकारलाई गीतको माग गर्नेहरुको संख्या पनि बढिरहेको बताउँछन् ।
उनी आफू यहाँ सम्म आउनुमा उनी संधै राकेश किरातीलाई सम्झन्छन् । जस्ले उनलाई गीत लेखनमा निरन्तरता दिन उत्प्रेरित गरेका छन् । जो कम्पोजर, गायक र निर्देशनमा समेत अब्वल रहेका छन् ।
गीतकार राई गीत लेखनमा मात्र नभई आफू गायनमा समेत रुचि राख्ने बताउँछन् । उनी खोटाङको रियलिटी गायन प्रतिस्पर्धा ‘खोटाङ तारा’ पहिलोमा आफुले पहिलो राउण्डको प्रतिस्पर्धामा दिदी पार्वती राई र राई नवीन ज्यूको हातबाट दोस्रो राउण्डको लागि प्रमाण पत्र अथवा टिकट पनि प्राप्त गरेको तर कारण बस दोस्रो राउण्डमा जान नसकेको बताउँछन् । उक्त खोटाङ ताराको उपाधि रेवत राईले जितेका थिए । मौका पाए कुनैपनि स्टेजमा आफ्नो गायन कला प्रस्तुत गर्न सक्ने समेत उनी बताउँछन् ।
उनका हालसम्म रेकर्ड भईसकेको गीतहरू निम्न प्रकार रहेका छन् :
१, मन मारेर पुरे कहिले, पारे खरानी..कोही आएनन्, एक्लै परें मनको मलामी – स्वर राजेश पायल राई संगीत राकेश किराती ।
२, तिमी भयौ जून आकाशको, मत शीत भुईको, स्वर अन्जु पन्त, संगीत शान्तिराम राई ।
३, मारुनी मा आउछु भन्थेउ बोकी याद, एल्वम कोसेली , स्वर राकेश किराती, संगीत बिनोद खम्बु ।
४, तिम्रो हेराइ नसालु, मेलिना राई
५, घुम्दै फिर्दै आइयो, ममता राई, केशव भावुक, संगीत गोपाल खम्बू ।
६, कहिले काहि ऐनामा, अमृता लिम्बू।
७, एउटा कुरा साँचो भन, रोशन राई।
८, तिम्लाई जस्तै एलिना राई,
यी लगायत अरु ६/७ वटा गीतहरू रेकर्डिङको क्रममा रहेको गीतकार राईले परदेशी खबरसंगको भलाकुसारीमा बताएका छन् । यदुराज राईलाई एउटा नेपाली कथानक चलचित्रको टाइटल गीत लेख्ने अवसर पनी पाएको उनी सुनाउँछन् ।
गीतकार राईको गीत लेखन यात्रा निरन्तर अगाडी बढीरहुन् । हाम्रो शुभकामना !
« ९६ दलले पाए चुनाव चिन्ह, राणा र लोहनी दुबैलाई हलो (सूचीसहित) (Previous News)
(Next News) एक्सक्लुसिभ: बुद्ध लामालाई सर्बाधिक मत, निशान भट्टराई तेस्रो (मत परिणामसहित) »